Imagine Communications to deliver virtualised IP-based playout for Médias du Sud/VIA – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » သတင်း » မီဒီယာ du Sud / VIA များအတွက် virtualised အိုင်ပီ-based ပလေးအောက်ကိုကယ်နှုတ်ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
မီဒီယာ du Sud / VIA များအတွက် virtualised အိုင်ပီ-based ပလေးအောက်ကိုကယ်နှုတ်ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
cloud-ဇာတိ Unified ပလေးအောက်ကိုစီစဉ်ခြင်းဖြေရှင်းချက် 20-ရုပ်သံလိုင်းဖြန့်ကျက်မှုအတွက်မကြုံစဖူးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေး
အမ်စတာဒမ်စက်တင်ဘာ 13, 2017 - ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, ေူပာင်းလဲဆန်းသစ်တီထွင်မှုကနေတဆင့်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအားပေးကြောင်း VIA လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေပဏာမပြင်သစ်တွင်ဒေသခံတီဗီဘူတာ၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသားရေး Group ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းစေမည်ကိုထောကျပံ့ဖို့ပြင်သစ်မီဒီယာ du Sud ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအဆင့်မှာတော့မီဒီယာ du Sud / VIA ဗဟိုပလေးအောက်ကိုဒေတာစင်တာကနေဒေသဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပို့, 20 မြို့အခြေစိုက်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအိုင်ပီ-based ဖြန့်ကျက်နေတဲ့အပြည့်အဝ virtualized, ဆော့ဖ်ဝဲ-သတ်မှတ်ထားသောမီဒီယာစက်ရုံများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်သွက်လက်နှင့်အတူအစဉ်အလာထုတ်လွှင့်စစ်ဆင်ရေး၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်မှီခို fusing ခြင်းဖြင့်ထိရောက်မှုသစ်အဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ပြင်သစ်အော်ပရေတာမှအထောက်အပံ့။
အသစ်ကစက်ရုံ၏စိတ်နှလုံးမှာ Versio ™ featuring တစ်ဦးစုစည်းပလေးအောက်နှင့်အချိန်ဇယားဆွဲဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ'' အပြည့်အဝ virtualised cloud-ဇာတိပလေးအောက်စနစ်, နှင့် xG ဇယား™, linear များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံး cloud-based အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အချိန်ဇယားဆွဲစနစ်, On-demand နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်း။ အဆိုပါNexio® mCAPTURE ™အသက်ရှင်သောအသံဖမ်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ၏ထောက်ခံမှုအတွက် IP ကိုစားသုံးမိပါစီမံခန့်ခွဲ။ ပုဂ္ဂလိကဒေတာစင်တာကိုဖြန့်ကျက်ဆစ်ဂနယ်များနှင့် routing ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် signal ကိုထပ်တူနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးခွငျးအားဖွငျ့စံချိန်စံညွှန်းအရည်အသွေးထုတ်လွှင့်ဖို့တင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုသေချာကူညီပေးသည်ဆိုပါစို့နေ microservices-based ဖြေရှင်းချက်ခံရမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းကိုလည်းစွမ်းရည်စောင့်ကြည့်များအတွက် EPIC ™သင်္ဘော MV မြင်ကွင်းစုံပေါ်တွင်မူတည်သည်။
"ကျနော်တို့အိုင်တီကွန်ရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေအလွန်ထိရောက်ဖြေရှင်းချက်အဆိုပြုနိုင်ကြောင်းနည်းပညာမိတ်ဖက်လိုအပ်သော VIA ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကိုဖွင့်ရန်," Philippe ဗန်က de Velde, မီဒီယာ du Sud / VIA မှာနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ က virtualised နည်းပညာနှင့် IP ကွန်ရက်နှင့်အတူထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရလက်ထပ်ထိမ်းမြားနိုင်လျှင်, ဖြစ်ကောင်းအရေးအကြီးဆုံးကတော့ချက်ချင်းကြောင့်ကယ်မလွှတ်နိုင်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ "
ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီး Occitanie အတွက် operating ပထမလေးလိုင်းများ, တစ်နှစ်ထက်လျော့နည်းထွက်လှိမ့်ခံရဖို့ကနဦးအဆင့်တွင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါ 2017 ဘူတာ၏ကျန်အတူစက်တင်ဘာလ 20 အတွက်လေထုအပေါ်ဖြစ်ရန်စီစဉ်ထားကြသည် ။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုသြဂုတ်လ 2017 စတင်ခဲ့သည်။ အစီအစဉ်များအားလုံးအတူတူပင်အလယ်ပိုင်းဒေတာစင်တာကနေမောင်းထုတ်, နောက်ဆုံးမှာ 30 ဘူတာကိုဖုံးလွှမ်းရန်ချဲ့ထွင်ဖို့ကွန်ယက်များအတွက်ခေါ်ဆိုပါ။
အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်ပလေးအောက်၏တင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှုလည်းဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုပူးတွဲတင်ပြထားစဉ်ထိရောက်စွာတိုးတက်စေရန်မီဒီယာကုမ္ပဏီကူညီပေးနေ, Over-the-ထိပ်တန်းဖြန့်ဖြူးခြင်းအပါအဝင်ဂီယာ, secure ချန်နယ်ဖြစ်ပေါ်ရာမှလုပ်ငန်းအသွားအလာ streamlines ။ စီးပွားရေးနှင့်ပလေးအောက်စစ်ဆင်ရေး၏ပြိုကျကိုလည်းလက်စွဲအချိန်ဇယားကိုပြုပြင်မွမ်းမံဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်နှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးပေါ်အာရုံစူးစိုက် Media du Sud / VIA ခွင့်ပြု, မာစတာထိန်းချုပ်မှု suite မှာမှားယွင်းသောနှိုးစက်၏ဖြစ်ပွားမှုလျှော့ချစေရန်ကူညီပေးသည်ရာ, စီးပွားရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို automation နေဖြင့်စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းကူညီပေးသည် နှင့်အခြား On-ဝေဟင်စိုးရိမ်မှုများ။
"ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ယခုတချို့နှစ်ပေါင်းအောင်ခဲ့ကြသည့်ကိစ္စတွင်အလွန်ရှင်းလင်းသောသရုပ်ပြကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီစာချုပ်အနိုင်ရဝမ်းသာနေကြတယ်" ဟု Mathias Eckert မှာ EMEA များအတွက်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကဆိုသည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ "ဒါဟာအလွန်, ဒဏ်ခံတန်ဖိုးရှိရှိနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့်ပြီးပြည့်စုံသော, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined, အိုင်ပီဂေဟစနစ်ဖြစ်ပါသည် - ။ virtualisation နှင့် IP မရှိတော့သိပ္ပံစီမံကိန်းများဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အရိပ်အယောင်, ဒါပေမယ့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာနည်းပညာများ"
ဒါပေမယ့်လည်းဝုဏ်-based ကရိယာအပေါ် Deployable - - Zenium ™စွမ်းအားဖြင့် Versio, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့စင်ကြယ်သော-IP ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုပထမဆုံး cloud-ဇာတိ, microservices-based ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ပထဝီလူစုခွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပါတယ် (COTS စီးပွားဖြစ်-Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကို အသုံးပြု. ) ဟာ့ဒ်ဝဲ။ ထို့အပြင် Zenium စွမ်းအားဖြင့်အဆိုပါ EPIC သင်္ဘော MV မြင်ကွင်းစုံ, ရဲ့စဉျးစားကွညျ့စင်ကြယ်သော microservices ပလက်ဖောင်းသည်အကြီးဆုံးနှင့်အရှုပ်ထွေးဆုံးတပ်ဆင်၏စောင့်ကြည့်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ချုံ့ချဲ့နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ IBC2017 (4.A01 ရပ်) မှာ Unified ပလေးအောက်ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်၎င်း၏တစ်ခုလုံးကိုမျိုးဆက်သစ်ဗိသုကာဖြေရှင်းချက်အစုစုကိုသရုပ်ပြလိမ့်မည်။
ဤအဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ပတ်သက်. အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.imaginecommunications.com.
Dejero နှင့်ကောင်းကင်ကနေ High Quality ရီးရဲလ်အချိန်ဗီဒီယိုပို့ဆောင်ရေးပေးဖို့ Draganfly Partner - ဇူလိုင်လ 10, 2018
Encore ပီကာဆို၏ဇာတ်လမ်းရာဆွဲရန် Baselight မှလှည့် - ဇူလိုင်လ 5, 2018
စစ်မှန်သောရူပါရုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူထိုင်းရဲ့ပထမဦးစွာ 4K UHD ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်လွှမ်းခြုံဘဝမှကယျတငျ - ဇွန်လ 28, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ပေါင်းစည်းမှု မီဒီယာ du Sud MKM Marcomms ပလေးအောက်ကိုအချိန်ဇယားဆွဲ တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-13
ယခင်: FilmLight ရှေ့ဆက် IBC5.0 ၏ Baselight 2017 ဖြန့်ချိ
နောက်တစ်ခု: အလိုက် Box ကိုအပေါ်မင်္ဂလာပါ-ကို Global နည်းပညာနှင့်အတူ Viaccess-Orcas အပေါင်းအဖေါ်များချိတ်ဆက်တီဗီအတွေ့အကြုံများအတွက်
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (524) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "မီဒီယာ du Sud / VIA များအတွက် virtualised အိုင်ပီ-based ပလေးအောက်ကိုကယ်နှုတ်ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ" ။ http://www.broadcastbeat.com/imagine-communications-to-deliver-virtualised-ip-based-playout-for-medias-du-sudvia/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။